Malawi Archives • Ọmụma ihe ịga nke ọma
Ọgụgụ ngwa ngwa Atụmatụ ezinụlọ, ike ịmụ nwa, na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ: Kedu ka e si jikọta ha?
Ị chetụla otú, ọ bụrụ na ọ bụla, mmemme ngụkọ na nyocha gbasara atụmatụ ezinaụlọ na ahụike ọmụmụ? Ha na-eme, ntakịrị ntakịrị. Data ngụkọ na-enyere mba dị iche iche aka ime mkpebi ndị ọzọ gbasara ozi mgbe ha na-ekesa akụrụngwa ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti1696 Echiche
Q&A Data bụ isi ihe maka ime mkpebi dabere na ihe akaebe siri ike
Maka mkpebi siri ike dabere na ihe akaebe, data na ọnụ ọgụgụ dị mkpa. Iji hụ na atụmatụ kwesịrị ekwesị na ahụike ọmụmụ, izi ezi na nnweta data a enweghị ike mesie ike karịa. Anyị gwara Samuel Dupre okwu, onye ọnụ ọgụgụ ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti2270 Echiche
Ọgụgụ ngwa ngwa Akụkọ ịga nke ọma nke nlekọta onwe onye Malawi: Iwebata ngwa ngwa nke mgbochi mgbochi afọ ime onwe onye
Leigh WynneSuzanne Fischer Julaị 22, 2020
Akụkọ ihe mere eme nke Malawi ngwa ngwa, ntinye nke oma nke DMPA subcutaneous nke etinyere onwe ya (DMPA-SC) n'ime usoro ngwakọta bụ ihe atụ nke imekọ ihe ọnụ na nhazi. Agbanyeghị na usoro a na-ewekarị ihe 10 afọ, Malawi achieved it in ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti4731 Echiche
N'ime omimi Opening Doors: Mentoring for Effective Advocacy
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti4524 Echiche
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti20765 Echiche